Izinketho zokulala Memory Foam Foam Matress | Rayson
Izinketho zokulala inkumbulo umatilasi
IRaysonon ibilokhu isebenza ngenhloso yokuba yibhizinisi elikhokhelwa kahle nelindelwe kahle. Sineqembu eliqinile le-R & D elisekela ukuthuthukiswa kwethu okuqhubekayo kwemikhiqizo emisha, efana nezinketho zokulala imemori Maistress. Sinaka kakhulu insizakalo yamakhasimende ngakho-ke sisethe isikhungo senkonzo. Abasebenzi ngamunye abasebenza enkabeni baphendula kakhulu ezicelweni zamakhasimende futhi bangakwazi ukulandelela isimo se-oda nganoma yisiphi isikhathi. I-tenet yethu yaphakade ukuhlinzeka amakhasimende ngemikhiqizo engenziwa ngempumelelo nekhwalithi ephezulu, kanye nokwakha amanani amakhasimende. Sithanda ukubambisana namakhasimende emhlabeni wonke. Xhumana nathi ukuthola imininingwane eminingi.
Ngezinketho eziphelele zokulala ze-Memory Foam Foam Foam Foam Foam, abasebenzi abanolwazi, iRayson Spring Matress Makhiqikhi ngokuzimela, bathuthukise, bakhiqize, bahlole yonke imikhiqizo ngendlela ephumelelayo. Kuyo yonke inqubo, ochwepheshe bethu be-QC bazoqondisa inqubo ngayinye ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, ukulethwa kwethu kufike ngesikhathi futhi kungahlangabezana nezidingo zawo wonke amakhasimende. Siyethembisa ukuthi imikhiqizo ithunyelwa kumakhasimende aphephile futhi azwakalayo. Uma unemibuzo noma ufune ukwazi kabanzi mayelana nezinketho zethu zokulala inkumbulo yezinkumbulo ze-Foam Feam, usishayele ngqo.
Sineqembu elinolwazi eliqukethe ochwepheshe bezimboni eziningana. Baneminyaka yesipiliyoni ekwenziweni nasekuklameni izinketho zokulala imemori yomatilasi. Ezinyangeni ezedlule, bebelokhu begxile ekuthuthukiseni ukusetshenziswa komkhiqizo okusebenzayo, ekugcineni bakwenza. Ukukhuluma ngokuziqhenya, umkhiqizo wethu uthokozela uhla lwesicelo olubanzi futhi ungasiza kakhulu uma lusetshenziswa emikhakheni (yezinketho zokulala zememori yokulala.